Tag: malitere ịrịa ọdịnaya | Martech Zone
Tag: malitere ịrịa ọdịnaya
Otu esi agwakọta ahia ahia gi
Saturday, October 31, 2015 Douglas Karr
Enwere m obi ụtọ ihe ọmụma a site na JBH na akụkọ na ihe osise ọ na-ewepụta ka ị na-eche banyere ọdịnaya. 77% nke ndị ahịa ugbu a na-eji ahịa ọdịnaya na 69% nke ụdị mepụta ọdịnaya karịa ka ha mere otu afọ gara aga. Dịkwa ka onye ọ bụla nwere uto maka mmanya mmanya kachasị amasị ha, ọ dị mkpa icheta na ndị na-ege gị ntị dịgasị iche - ọtụtụ na-ekpori ndụ n'ụdị ọdịnaya karịa ndị ọzọ. Iji nyere gị aka imelite ahịa ọdịnaya gị
Ihe mere ihe omuma bu ihe kwesiri ibu na ahia ahia
Sunday, Jenụwarị 4, 2015 Sunday, Jenụwarị 4, 2015 Douglas Karr
Afọ gara aga bụ afọ ọkọlọtọ maka mmemme infographic ụlọ ọrụ anyị. Echeghị m na e nwere otu izu na-aga na anyị enweghị ọnụ ọgụgụ dị nta maka mmepụta maka ndị ahịa anyị. Oge ọ bụla anyị hụrụ ihe arụ n’ọrụ onye ahịa anyị, anyị na-amalite nyocha isiokwu maka ozi ha ọzọ. (Kpọtụrụ anyị maka ọnụego!) Ọtụtụ oge anyị na-ejikọ usoro ndị ahụ na akwụkwọ ọcha, microsites mmekọrịta na mkpọsa nkwado ndị ọzọ - mana enweghị obi abụọ na itinye ego na
Site na mgbasa ozi nke mgbasa ozi ọha na eze, m ga-atụ anya na imirikiti azụmaahịa na-enyocha mkpọsa ọ bụla ha na-eme na-enwe olileanya na a ga-ekerịta ya site n'okwu ọnụ iji mee ka ọ rute na ike ya. Gini bu azu ahia? Ahịa ịre ahịa Viral na-ezo aka na usoro ebe ndị na-ahụ maka ọdịnaya na-eji ngwa ngwa mepụta ọdịnaya nke na-adị mfe ibugharị ma na-arụ ọrụ nke ọma ka ọtụtụ ndị na-ekerịta ya ngwa ngwa. Vehiclegbọ ala ahụ bụ isi ihe dị mkpa -
Mee ka Ọdịnaya Ọdịnaya Gị Na-aga Gbanwee na Usoro 5 ndị ​​a
Sunday, July 6, 2014 Sunday, July 6, 2014 Douglas Karr
Anyị ekenyela akwụkwọ nkọwa ndị ọzọ gbasara ihe dị na ọdịnaya nke ịrịa ọrịa na ọ na-esiri m ike ịmalite ịrịa dị ka atụmatụ. Ihe omimi nke ihe omuma nwere ike iweta ihe omuma - anyi na-ahu nke a mgbe nile na vidiyo. Agbanyeghị, ahụtụbeghị m onye ọ bụla kụrụ ya n'ogige ahụ oge ọ bụla. Fọdụ na-agbasi mbọ ike, ụfọdụ na-adaba adaba truly ọ bụ n'ezie nchikota nke onyinye na ihu ọma nke na-eme ka ọdịnaya gị dị elu. Nke ahụ kwuru, Ekwenyere m na usoro ahụ eji eme ihe mgbe ị na-elekwasị anya
Ihe nzuzo isii nke onye nyocha nke ọdịnaya na-efe efe
Fraịde, Ọktọba 25, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
E gosipụtara Jenn Lisak nke anyị maka ndụmọdụ ya mgbe anyị na-emepe ọdịnaya. Kedu ihe ọ ga-ewe, kpọmkwem, ka ọdịnaya wee na-efe efe? Prọfesọ na-ere ahịa Jonah Berger dere banyere ya n'akwụkwọ ya, Contagious: Why Things Catch On. Dị ka Prọfesọ Berger si kwuo, nzọụkwụ mbụ bụ mmetụta uche. Ọ bụrụ na ọdịnaya gị anaghị ejikọ ndị na-ege ntị na mmụọ, enweghị ohere ọdịnaya ga-efe efe. WhoIsHostingThis.com etinyela ihe omuma a nke ihe omumu Prọfesọ Berger!